(၅) ရက္အတြင္းမွာ ၾကည့္ရႈသူ(၁)သန္း ရရွိခဲ့တဲ့ ျဖဳျဖဴေက်ာ္သိန္း ရဲ႕ “ထြက္သြားပါေတာ့” သီခ်င္း – Let Pan Daily
ပရိသတ္ႀကီးေရ အသံပါဝါ ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ သီခ်င္းေတြကိုသီဆိုတတ္တဲ့ အဆိုေတာ္ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္းကေတာ့ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာေအာင္ျမင္မႈေတြရရွိခဲ့တဲ့အဆိုေတာ္တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။သူမကေတာ့ ေတးသီခ်င္းအယ္လ္ဘမ္ေပါင္းမ်ားစြာထြက္ရွိထားၿပီး ဆန္းသစ္တဲ့ေဖ်ာ္ေျဖမႈ ပုံစံေတြေၾကာင့္လည္း ပရိသတ္ေတြရဲ႕အားေပးမႈကို အခိုင္အမာရရွိခဲ့သူလို႔ ဆိုရမွာပါ။
လတ္တေလာမွာဆိုရင္ေတာ့ ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း က “ ထြက္သြားပါေတာ့ ”ဆိုတဲ့ သီခ်င္း Official MV ေလး ထြက္ရွိထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ျဖဴျဖဴရဲ႕ “ထြက္သြားပါေတာ့” သီခ်င္းေလးကေတာ့ ပရိသတ္ေတြရဲ႕အႀကိဳက္နဲ႔ ထပ္တူက်ခဲ့ၿပီး သီခ်င္းေလးတင္ၿပီး (၅)ရက္အတြင္းမွာၾကည့္ရႈသူ(၁)သန္း ရရွိခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ျဖဴျဖဴကေတာ့ သူ႔ရဲ႕သီခ်င္းေလးကို (၁)သန္းျပည့္ေအာင္ၾကည့္ရႈေပးတဲ့ပရိသတ္ေတြကို အခုလိုပဲေက်းဇူးတင္စကားဆိုခဲပါတယ္။
သူမကေတာ့ “ Happy Blessed Morning!!!ထြက္သြား ပါေတာ့ သီခ်င္း Official MV ေလး 1 Million View ထိသြားပါၿပီရွင္🥰၅ ရက္ အတြင္း 1 M ထိေအာင္ၾကည့္ရႈအားေပးၾကတဲ့ခ်စ္ ပရိသတ္အားလုံးကိုေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္သီခ်င္းေလးရဲ႕ audio နဲ႔ music video ဖန္တီးမႈမွာအဖက္ ဖက္ကပါဝင္ ပတ္သက္ေပးခဲ့ၾကတဲ့သူအားလုံးကိုလည္း ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္🙏ျဖဴျဖဴ အၿမဲဆက္ႀကိဳးစားေနပါ့မယ္”ဆိုၿပီး သူ႔ရဲ႕လႉမႈ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမွာေရး သားထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္ ပရိသတ္ႀကီးေရ…။
(၅) ရက်အတွင်းမှာ ကြည့်ရှုသူ(၁)သန်း ရရှိခဲ့တဲ့ ဖြုဖြူကျော်သိန်း ရဲ့ “ထွက်သွားပါတော့” သီချင်း
ပရိသတ်ကြီးရေ အသံပါဝါ ကောင်းကောင်းနဲ့ သီချင်းတွေကိုသီဆိုတတ်တဲ့ အဆိုတော်ဖြူဖြူကျော်သိန်းကတော့ ဆယ်စုနှစ်များစွာအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တဲ့အဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ တေးသီချင်းအယ်လ်ဘမ်ပေါင်းများစွာထွက်ရှိထားပြီး ဆန်းသစ်တဲ့ဖျော်ဖြေမှု ပုံစံတွေကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရရှိခဲ့သူလို့ ဆိုရမှာပါ။
လတ်တလောမှာဆိုရင်တော့ ဖြူဖြူကျော်သိန်း က “ ထွက်သွားပါတော့ ”ဆိုတဲ့ သီချင်း Official MV လေး ထွက်ရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖြူဖြူရဲ့ “ထွက်သွားပါတော့” သီချင်းလေးကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့အကြိုက်နဲ့ ထပ်တူကျခဲ့ပြီး သီချင်းလေးတင်ပြီး (၅)ရက်အတွင်းမှာကြည့်ရှုသူ(၁)သန်း ရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖြူဖြူကတော့ သူ့ရဲ့သီချင်းလေးကို (၁)သန်းပြည့်အောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့ပရိသတ်တွေကို အခုလိုပဲကျေးဇူးတင်စကားဆိုခဲပါတယ်။
သူမကတော့ “ Happy Blessed Morning!!!ထွက်သွား ပါတော့ သီချင်း Official MV လေး 1 Million View ထိသွားပါပြီရှင်🥰၅ ရက် အတွင်း 1 M ထိအောင်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ချစ် ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်သီချင်းလေးရဲ့ audio နဲ့ music video ဖန်တီးမှုမှာအဖက် ဖက်ကပါဝင် ပတ်သက်ပေးခဲ့ကြတဲ့သူအားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်🙏ဖြူဖြူ အမြဲဆက်ကြိုးစားနေပါ့မယ်”ဆိုပြီး သူ့ရဲ့လှူမှု ကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေး သားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ…။
မြင်ရင် ကြွေစေလောက် တဲ့ အရုပ် မလေး လို လှနေ တဲ့ မော်ဒယ် ဖြူသိင်္ဂကျော်
ရင်ဖိုလှိုက်မောစရာ အလှတရားတွေ ပေါ်လွင်နေပြီး အမိုက်စား ပုံစံလေး နဲ့ ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိလှနေတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ချပြ လာတဲ့ “ဇာဇာထက်”